I-Ares, enye indlela ye-CAD yeLinux kunye neMac-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ares, enye i-CAD ye-Linux kunye ne-Mac
Azikho izisombululo ezininzi zokuncedisa eziya ngaphaya kweWindows. I-ArchiCAD ibinesithukuthezi kwi-Mac, ngoku I-AutoCAD igqibile ungena kule makethi, kwaye iAres yenye enye inomdla. Igama lakhe alizwanga njenge-AutoCAD, ngomthunzi owenziwa ngu-P2P kwiprogram kwaye oko kusikhumbuza ngunkulunkulu wemfazwe kwi-Mythology yamaGrike.
Kodwa iAres iyisisombululo esinamandla esingaqhubekiyo kuphela kwiiqonga ezintathu eziphambili: iMac, Windows kunye neLuxu.
Indlela ares azalwa ngayo
Ngelixa kuncinci okwaziwayo malunga nale software, inkampani eyenzileyo ayisiyonto intsha kuyo. Lo nguGraebert GmbH, owazalwa ngo-1983, umthengisi wokuqala we-AutoCAD eJamani.
Kwi-1993 ihlukaniswe kwi-AutoDesk kwaye unyaka kamva baqalisa uFelixCAD, owabizwa ngokuba yiCowerCAD, ngoku GiveMePower Inc. Oku kusekho nangona ixhasa kuphela iinguqulelo ze-dwg 2.5 ukuya kuthi ga ngo-2002.
Graebert waye uMdali PowerCAD CE, apho kunyaka 2000 zaye zasasazeka njengenye izicelo CAD ezimbalwa PDA.
Ukusuka kwi-2005 baqala ukusebenza ngombono omtsha owasungulwa de kube yiminyaka emihlanu kamva, ngaphandle kwayo iSurvey. Ukusukela kunyaka ophelileyo sibonile kwiphephancwadi ECadalyst ezinye iingxelo ezikhangayo zeAres.
Kucacile ukuba akukho mntu sele ene-AutoCAD oya kuba nomdla ekusebenziseni esinye isisombululo ngaphandle kokuba bafumane ixabiso elongeziweyo elibamba ingqalelo yabo. Makhe sibone ukuba sisiphi isisombululo:
Oku kunomdla kakhulu, ngakumbi kubasebenzisi abasetyenziselwa ukuthatha ithuba kwiinkqubo ezisebenzayo zeMac, ezibekwe kakuhle kwicandelo loyilo. Masingatsho iLinux.
I-Ares isebenza kwi-Apple kwi-Mac OS X 10.5.8 okanye kwiinkqubo ezingaphezulu.
Kwakhona kwi-Windows XP, Vista kunye ne-Windows 7.
Malunga nokusasazwa kweLinux: Ubuntu 9.10 Gnome, Fedora 11 Gnome, Suse 11.2 Gnome, Mandriva 2010 Gnome kunye ne KDE.
Uphuhliso olunokwenzeka kunye nexabiso.
Ii-Ares ziza kwiinguqulelo ezimbini: Ukufowuna kuphela iiAres ($495.99), kunye nezinye i-Ares CE (i-Comander Edition) ($995.00). Kunokuthiwa ngokwexabiso linomtsalane kakhulu, kunokwenzeka ukuba ufudukele kwixabiso elisezantsi kunePowerCAD 6 kunye ne-7 nangona loo software ingasenayo iGraebert.
Ixabiso elongezwe yinguqulelo yeComander Edition likwisiseko sokukhulisa usetyenziso. Ungathatha ithuba leLisp, C, C ++, kunye neenkqubo zeDRX ukwenza imisebenzi emitsha, ii-macros, kunye neeplagi. Kwinguqulelo yeWindows ungasebenza neVisual Studio yeVenkile (i-VSTA), iDelphi, i-ActiveX, i-COM, kubandakanya ne-OLE ebophelelayo.
Unokwenza ngokuqhelekileyo umsebenzisi womsebenzisi usebenzisa ii-toolbars kunye neenombolo ze-XML.
Ezinye izinto ezithakazelisayo zeAres
I-Ares isebenza kwifomathi yemveli ye-dwg 2010, nangona inokufunda kwaye iguqulele nakweyiphi na ifomathi ye-dwg / dxf kwiinguqulelo ze-R12. Ikwafunda kwaye ihlele iifayile zeemilo ze-ESRI.
Unxibelelwano luyasebenza, kunye neepaddle ezirhuqa ngokulula kwaye zihlala ngaphandle kokujika okukhulu. Ukusebenza kokucofa ekunene kokusebenza kwenza umsebenzi ube lula, nangona ikwaxhasa umgca wokuyalela wabasebenzisi abathanda isiko lakudala.
Iipropathi zezinto zihamba ngaphaya kweempawu ezilula. Kuyenzeka ukuba wenze izichazi kumzobo, ezinje ngemizobo esimahla, kwanokudibanisa iaudiyo kunye nabo. Bacinga ukuba:
"Lungisa yonke le ndawo, ngokweblogi kwiphepha lakho le-11, xa usugqibile ukuyithumela kwi-imeyile yam kwaye ujonge ukutyikitya kolawulo lwesontraka"
Ukusebenza kulawulo lweendlela zokuprinta, izixhobo ezichanekileyo (ii-smart snaps) kunye nomzobo we-3D (esekwe kumgangatho we-ACIS) ziyafana ne-AutoCAD. Nangona unikezelo lunokudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zokwenza umthunzi kwimbono efanayo kunye nokwenziwa kweetemplate zokuprinta kubonakala kusebenza ngakumbi, ukusondeza / ipani nayo ayikuthathi ukuhlaziya kwaye inokusebenza ngexesha lokwenyani ngaphandle kokubulala imemori kakubi.
Uncedisa izifanekiso ze-DWT, i-DWGCODEPAGE, unako ukulayisha iingxelo zangaphandle usebenzisa iipolinam (kungekhona nje umxube), hlela iibhloko kwi-fly, ukuthumela kuma-pdf / dwf.
Ngapha koko, sisixhobo esikhulu esiza ngaphezulu kweelwimi ze-12, kubandakanya iSpanish nesiPhuthukezi. Kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba bahamba njani ngokubekwa kwindawo yentengiso efanelekileyo kodwa benamandla amakhulu.
Apha ungalanda iinguqu zezilingo kwiintsuku ze-30: